Vivo Z6 5G, ekwentị ọhụrụ nwere Snapdragon 765G nke amalitelarị | Gam akporosis
Vivo Z6 5G, ekwentị ọhụrụ nwere Snapdragon 765G nke ebuputere
Otu n'ime ekwentị ndị anyị kwurula banyere ọtụtụ n'ime izu ndị na-adịbeghị anya bụ Ana m ebi Z6 5G. E meelarịrị ngwaọrụ a na eze, yabụ na anyị amatala atụmatụ na nkọwa niile ọ na-etu ọnụ, yana nkọwa ọnụahịa ya niile na nnweta na ahịa.
Ọnụ ya mezuru ọtụtụ amụma. N'ezie, onye na-emepụta China bụ isi na-eweta njirimara ya, yabụ na anyị amaworị ihe ọmụma banyere ụfọdụ ihe ọ ga-eweta.
1 Ihe niile banyere Vivo Z6 5G ọhụrụ
Ihe niile banyere Vivo Z6 5G ọhụrụ
Ana m ebi Z6 5G
Iji malite, Vivo Z6 5G dị 163.99 x 75.71 x 9.16mm ma tụọ gram 201. Ahu nke igwe a nwere 6.57-inch inch diagonal IPS LCD nke na-akwado mkpebi FullHD + nke 2,400 x 1,080 pikselụ (20: 9) na oghere dị na akuku aka nri nke nwere ụlọ igwefoto selfie 16 MP na oghere f / Ugboro abụọ Ihe ngebichi na ahu bu 2.48%, ekele diri oke di na nso nke na akwado iboju.
Igwefoto nwere akụkụ anọ nke ekwentị a nwere, nke etinyere ya na usoro ihe osise akụkụ anọ n'azụ, bụ onye a na-eduzi Isi ihe 48 MP nwere oghere f / 1.79 na oghere 6P. Ihe mmetụta atọ ndị ọzọ na-ejikọta ya bụ igwefoto 8 MP nke nwere f / 2.2 na elele anya 112 Celsius, ihe ngosi 2 MP macro (f / 2.2) na lens 2 MP (f / 2.4). mmetụta omimi. Ndị a na-enye atụmatụ dịka Super Night Scene 2.0, Hyper HDR, mmepụta RAW, nkwụsi ike vidiyo, na ndekọ vidiyo vidiyo 4K.
N'aka nke ọzọ, n'usoro nke ike, na Qualcomm Snapdragon 765G obu onye na eweputa ya. E kewara isi asatọ dị ka ndị a: 1x Kryo 475 Prime (Cortex-A76) na 2.4 GHz + 1x Kryo 475 Gold (Cortex-A76) na 2.2 GHz + 6x Kryo 475 Silver (Cortex-A55) na 1.8 GHz , o nwere ọnụ ọnụ ọnụ nke 10 nm ma jikọtara ya na Adreno 620 GPU.
A na-akwado chipset a ebe nchekwa 6/8 GB Ram na ebe nchekwa dị n'ime nke 128 GB. Ọzọkwa dị bụ batrị ikike 5,000 mAh nke nwere nkwado maka teknụzụ na-ebu ngwa ngwa SuperFlash 44-watt nke na-ekwe nkwa 0% na 70% ụgwọ naanị na 35 nkeji na 100% n'ihe dịka 65 nkeji. N’aka nke ya, eji ngwaọrụ PC-ọkwa igwe ihe eji ajụ mmiri.
Na larịị ngwanrọ, Android 10 tinyere FunTouch OS 10 na-abịa na Vivo Z6 5G. Ọzọkwa, atụmatụ Multi-Turbo 3.0 na-ekwe nkwa nkwalite arụmọrụ AI kwadoro, dị ka Game Space 3.0 na Igbe Egwuregwu, nke na-eme ka ahụmịhe egwuregwu ahụ ka elu. Tụkwasị na nke a, ekwentị ahụ na-akwado njikọta Wi-Fi abụọ, nwere onye na-agụ akwụkwọ mkpịsị aka azụ, usoro mmeghe ihu, nkwado abụọ SIM, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C na 3.5mm jack jack.
AKW ZKWỌ Z6 5G
IKIRU 6.57 »FullHD + IPS LCD with 2.400 x 1.080 pixels (20: 9) nwere oghere na ihuenyo ahụ
Nhazi Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz max.
Ohere TERLỌ N'IME 128 GB
Ndị isi Azụ: 48 MP isi (f / 1.8) na oghere 6P + 8 MP obosara (f / 2.2) + 2 MP macro (f / 2.2) + 2 MP omimi (f / 2.4) / Ihu: 16 MP (f / 2.48)
UMUAKA 5.000 mAh na 44-watt FlashCharge ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ nkà na ụzụ
OS A gam akporo 10 tinyere FunTouch OS 10 buuru ibu
Njikọ Dual Wi-Fi / Bluetooth 5.0 LE / GPS + GLONASS / Dual-SIM Nkwado / 4G LTE / 5G Njikọta
Atụmatụ ndị ọzọ Nghọta ihu / USB-C / Ntanaka mkpịsị aka na-agụ
Mbibi na ibu ibu 163.99 x 75.71 x 9.16 mm na 201 g
Emepere Vivo Z6 5G na China, yabụ ọ dịla na mba ahụ. A maghị mgbe a ga-enye ya na mpaghara ndị ọzọ, mana anyị maara ọnụ ahịa ya site na mbido, ha bụ ndị a:
Vivo Z6 5G 6GB Ram + 128GB nchekwa: 2,298 Yuan (~ 297 euro ma ọ bụ $ 327)
Vivo Z6 5G 8GB Ram + 128GB nchekwa: 2,598 yuan (~ 337 euro ma ọ bụ $ 370)
Varidị dị iche iche: Ice Age, Interstellar Silver na Aurora Black
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vivo Z6 5G, ekwentị ọhụrụ nwere Snapdragon 765G nke ebuputere
Nubia Red Magic 5G na-egosi na ezigbo foto nke na-akwado njirimara pụrụ iche ya
HTC Wildfire R70, njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Taiwanese na Mediatek's Helio P23